Mweya Buer Mashiripiti Lapel Pini yeReiki uye Holistic Kuporesa - Nyika yeAmulets
96 zvinhu zvasara
Buer inoshandiswa kuporesa, yetsika, inonzwisisika uye yakasikwa uzivi uye inogona kushandiswa kurwisa kudhakwa.
Buer anoporesa hosha dzese, uye anodzidzisa hunhu, zvakasikwa, uye zvine musoro uzivi. Anoodza mwoyo kudhakwa. Iye zvakare anodzidzisa ehupfumi hweayo ese mahebhu uye zvinomera.
Kubva kumuedzo wedu Lety:
Izvozvi ini ndichangopedza kuyedzwa kweLapel pini yeBuer. Uku kwaive kumwe kuwanikwa kunoshamisa. Kwete yakawanda yekuzviporesa pachayo asi yekukwezva vamwe vatengi, mazhinji acho. Mumasvondo ekupedzisira e2 ekuyedzwa ndakawana vatengi vatsva vakawanda kupfuura mumwedzi miviri yapfuura. Uye zvaive nyore kwazvo ... Ini ndinongopfeka pini ndoenda kunofamba kana kuungana pamwe neshamwari, kuva nechimwe chinhu pateresi zvichingodaro. Kana vanhu vakaona pini, vanongofamba vachiuya kwandiri uye kazhinji vanotaura zvakafanana; Ini handina kukwanisa kubatsira kuchereka pini iyi, chii icho? Kana ini ndinoda kuziva, waiwanepi pini iyo, ipini rudzii? Uye ini ndakangodhonzwa ndakanangana newe, pini iyi yawakapfeka yakakosha, ndingaiwana kupi?
Izvi zvakandipa iwo mukana wekuudza vanhu nezve yangu ekurapa masevhisi uye mazhinji acho anoveresa chikamu. Ndine chokwadi chekuti zvinokonzerwa nemasimba epini iyi. Ini handina basa nekuti simba rayo rinopera mushure memwedzi mipfumbamwe, ini ndichangowana imwe. Pini iyi inondipa mukana wekubatsira vanhu vazhinji nekupora kwangu. verenga chinyorwa chizere pano